MYANMAR-CHINA : Kyaukphyu-Muse railway project – video -BURMESE/ENGLISH | democracy for burma
MYANMAR-CHINA : Kyaukphyu-Muse railway project – video -BURMESE/ENGLISH
tags: 868.KM, ANN, Burma, Kyaukphyu-Muse railway project, KYAUKPYU, Lashio, MAGWAY, Mandalay, Memorandum of Agreement, MOU, Muse, Myanmar, MYANMAR : Kyaukphyu-Muse railway project, RAIL LINE ALIGNMENT, RAIL WAY, Video
The government has been trying to signafinal contract with China to startarailway project extending between the western and eastern regions of Myanmar without releasing any information to the public, reports say.
Officials from Myanmar and China signedamemorandum of understanding for railway project connecting Kyaukphyu, Rakhine State and Muse, Shan State two years ago and they are now trying to signamemorandum of agreement in the near future. Details about the project have not been released yet.
“Chinese Ambassador Mr Yang Houlan visited Maday Island yesterday (May 19) and met with the local residents. I don’t exactly know the reason for his visit. When we asked the Chinese ambassador whether there are railway and motorway projects in Maday Island, he didn’t giveadirect answer and said he didn’t know. The Chinese ambassador himself didn’t give an official disclosure about whether there isarailway project or not. We, the local residents, don’t get to know anything about the Kyaukphyu-Muse railway project,” said Tun Kyi,alocal resident from Kyaukphyu.
Local residents from Kyuakphyu also say that they were not informed about the oil and natural gas pipeline project and they only found out after the project started.
The residents say they will not accept any projects including the new railway and motorway projects that lack transparency and public notifications.
“The gas pipeline and Kyaukphyu deep seaport projects are nearly completed. The local residents are now suffering from the disadvantages of the gas pipeline project, but the authorities and respective companies continued to work [on the project]. When the locals protested to show their dissatisfaction, they get sued. Such kinds of things are still happening in this time,” said Snow from Myanmar-China Pipeline Watch Committee.
“Even though the government kept saying to have transparency, [they] haven’t done anything about it in reality. We accept the investment arriving to Rakhine State, but we only have the locals to benefit from these projects. Now, onlyagroup of people receive the benefits but the locals don’t receive any benefits. Instead, they have to face the consequences of the projects. As [they] still haven’t solved the compensation issues of the local residents, they shouldn’t work on the railway project now. So, I want to tell those who will make the decisions about the project to make the decisions after cooperating with the local residents,” she added.
The railway project is 868.262 kilometers long (539.19 miles) and will pass through Kyaukphyu, Ahn, Mandalay, Lashio, and Muse.
The project includes 79 train stations, 409 bridges, and 101 tunnels and will also connect with Kunming, Yunnan province in southern China. It will be built with full investment from China.
အများပြည်သူသို့ ချပြခြင်းမရှိဘဲ ကျောက်ဖြူ-မူဆယ် ရထားလမ်းစီမံကိန်း အပြီးသတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိမြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းမှ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပို့လွှတ်ရန် အဆင်သင့်နီးပါး ဖြစ်ချိန်၌ ကျောက်ဖြူ-မူဆယ် ရထားလမ်းစီမံကိန်း စတင်ရန်အတွက် အများပြည်သူသို့ ချပြခြင်းမရှိဘဲ အပြီးသတ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ကျောက်ဖြူ-မူဆယ် ရထားလမ်းစီမံကိန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၇ ရက်က မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများမှ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိကာလ၌ အဆိုပါ မီးရထားလမ်း စီမံကိန်းအတွက် Memorandum of Agreement ကို မကြာမီ ရေးထိုးရန် စီစဉ်နေကြောင်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကိုမူ လက်ရှိအချိန်အထိ ထုတ်ပြန်မှု မရှိသေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း စီမံကိန်း မစတင်မီက ဒေသခံများ မသိရှိဘဲ လုပ်ငန်းစတင်ခါမှသာ သိရှိခဲ့ရကြောင်း၊ လက်ရှိအပြီးသတ် စာချုပ်ချုပ်တော့မည့် ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း ရထားလမ်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဒေသခံများသို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိကြောင်း၊ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်းသာမက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ၊ ဒေသခံများသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသည့် မည့်သည့်စီမံကိန်းကိုမဆို ဒေသခံများ အနေဖြင့် လက်မခံကြောင်းလည်း ကျောက်ဖြူဒေသခံများက ဆိုပါသည်။
”ဂက်စ်ပိုက်လိုင်း၊ ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း တည်ဆောက်မှုတွေက ပြီးသလောက်ရှိနေပြီ။ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကို ဒေသခံတွေ ခံစားနေရပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတွေက ဆက်လုပ်ခဲ့တာပဲ။ ဒေသခံတွေက မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်တော့ ဒေသခံကို တရားစွဲတယ်။ ဒီအချိန်အထိ အဲဒါတွေ ရှိနေသေးတယ်။ အစိုးရက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ပါလို့ ပါးစပ်က ပြောနေပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အကောင်အထည် မဖော်ကြသေးဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလာတဲ့ investment တွေကို ရခိုင်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစီမံကိန်းတွေကြောင့် ဒေသခံတွေ အကျိုးရှိတာမျိုးလည်း ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အခုတော့ လူတစ်စုကသာ အကျိုးခံစားရပြီး ဒေသခံတွေက မခံစားရဘူး။ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကိုသာ ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံတွေရဲ့ နစ်နာမှုကိုတောင် မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘဲ ရထားလမ်း စီမံကိန်း လုပ်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်သင့်ဘူး။ အခု စီမံကိန်းကို ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမယ့် သူတွေအနေနဲ့ ဒေသခံတွေ ပူးပေါင်းဆုံးဖြတ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု မြန်မာ-တရုတ်ပိုက်လိုင်း စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီမှ ဒေါ်စနိုးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မီးရထားလမ်း စီမံကိန်းသည် စုစုပေါင်း အရှည် ၈၆၈ ဒသမ ၂၆၂ ကီလို မီတာ၊ မိုင်အားဖြင့် ၅၃၉ ဒသမ ၁၉ မိုင်ရှိပြီး ကျောက်ဖြူ၊ အမ်း၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ လားရှိုး နှင့် မူဆယ်မြို့များကို ဖြတ်သန်း တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မီးရထားလမ်း စီမံကိန်း၌ ဘူတာရုံ ၇၉ ခု၊ တံတား ၄၀၉ စင်း၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ၁၀၁ ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ မီးရထားလမ်းသည် ကူမင်းမြို့အထိ ဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရာနှုန်းပြည့်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်ဖြူမှ မူဆယ်အထိ ဖောက်လုပ်မည့် ရထားလမ်းစီမံကိန်းပြမြေပုံ
← Former Political Prisoners and AAPP provided some assistance to the Fifteen political prisoners who had been released on May 17th 2013
MYANMAR: Buddha images stolen in Bagan →